Dowladda iyo mucaaradka Suuriya oo mar kale ku kulmay Astana. – Radio Daljir
Janaayo 24, 2017 6:23 b 0
Astana, Jan 24 2017-Magaalada Astana ee dalka Kazakhstan ayaa waxaa maalinkii labaada ka socda wada hadalada nabadda ee u dhexeeya dowladda Suuriya ee uu hogaamiyo Bishaar Al-azad iyo xoogagga mucaaradda.
Wafuuda ka socota dowladda Suuriya iyo xoogagga mucaaradka ayaa maalinkii labaad kulansan, waxaana ay ka arrinsanayaan haddii ay macquul tahay inay xal u haleen mushkiladda dalkaasi ka socota mudada lixda sano ah.
Wararku waxay sheegayaan in wareegaani ay ka qaybgaleen siyaasiyiin ka socda labada dhinac, halkii ay horay uga qaybgelayaan hogaamiyayaal dhanka ciidanka ah oo ka socda mucaaradka Suuriya.
Xukuumadaha Turkiga, Ruushka, Iiraan iyo xubno kasocda Qaramada Midoobey ayaa isla asteeyey hanaan lagu ilaalinayo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan labada dhinac wada gaareen.
AKHRISO-Gudoomiye Jawaari oo shaaciyey gudiga doorashada madaxweynaha.